यसअघि हारेका राष्ट्रपतिले पद छोड्न नमान्दा के भएको थियो ? ट्रम्पले नमाने के हुन्छ ? – Dcnepal
प्रकाशित : २०७७ कार्तिक २३ गते ११:४९
काठमाडौं। अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन् । अब उनले आगामी जनवरी २० मा शपथ ग्रहण गरेपछि पदभार ग्रहण गर्नेछन् । त्यतिबेलासम्म अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । चुनाव प्रचारको क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू पराजित भएमा कानुनी बाटो रोज्ने र सहजै पद हस्तान्तरण नगर्ने बताएका थिए । उनको यो भनाइका आधारमा यदि उनले पद छोड्न अस्वीकार गरे भने के होला भन्ने विषयमा अहिले धेरैको चासो बढेको छ ।
राष्ट्रपतिका कर्मचारीहरुले उनीसँग आदेश लिन बन्द गरे र राष्ट्रपति कार्यालय पनि हटाइयो । हारेपछि पनि ह्वाइट हाउस नछाडेका जोनलाई सेना, सिआइए, एफबीआइ र ह्वाइट हाउस स्टाफले बेवास्ता गर्न थाले । आफूलाई अपमानित भइरहेको देखेपछि अन्ततः जोनले हार स्वीकार गरे । आधिकारिक रुपमा उनले ४ मार्च १८०१ मा मात्रै थोमसलाई कार्यभार सुम्पिए ।
जनवरीदेखि ट्रम्पको पारिश्रमिकबाट ह्वाइट हाउसको भाडा काटिन बन्द हुनेछ । जनवरीदेखि नै बाइडेनको राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक आउन सुरु हुनेछ र ह्वाइट हाउसको भाडा बाइडेनको तलबबाट काटिनेछ । २० जनवरी मध्य दिनपछि मेलानिया ट्रम्प ह्वाइट हाउसकी बोस रहने छैनन् । उनको स्थानमा ह्वाइट हाउसका कर्मचारीले डा. जिल बाइडेनलाई आफ्नो बोस मान्न सक्छन् ।